Nyanzvi yekuchengetedza inokwanisa kubiridzira AirTag. | Ndinobva mac
Nyanzvi yekuchengetedza inokwanisa kubiridzira AirTag
Kubva pandakaziva kuti Apple yaive kuseri kweprojekiti yekutanga iyo AirTagNdakafunga kuti chingave chinhu "chine ngozi" nekuda kwekureruka kwekugona "kusora" kune vamwe mapato. Zvichida ndosaka Apple yatora nguva yakareba kuti iise pakutengesa, ichitsvaga nzira yekuzvidzivirira kuburikidza nesoftware.
Apple yafanirwa kugadzirisa iOS zvekuti iyo iPhone inokuyambira kana vaisa "yekunze" AirTag yakavanzwa mumota yako kana muhomwe yako. Asi kana vakwanisa kubaya tracker kuti vadzivise yambiro, vanogona kushandura Apple kiyi yemaoko kuita spy ine simba locator yevanhu. Anga achingova mazuva gumi kubva payakaburitswa, uye yakatobiwa kare. Bhizinesi rakaipa, ipapo.
Kana Apple ikatanga mhando nyowani yeApple, tichangopedza kuona mavhidhiyo mu YouTube yevashandisi vanoita marudzi ese e "shit", kuti vaone "inobata", iyo modhi nyowani yegore, isu hatigone kutarisira chimwe chinhu kubva kuchinhu chitsva chinodhura maeuro makumi matatu nemashanu pachinzvimbo chechuru icho chinotengwa ne iPhone.
Ukatsvaga paYouTube unogona kuona AirTags yakabviswa, yakashandurwa kunge kiredhiti kadhi, yakaomeswa nechando, yakabikwa seza rakaomeswa, inotumirwa neposvo kutevera nzira neGPS, nezvimwe, nezvimwewo, ... Asi isu tawana vhidhiyo, iyo isisiri inosetsa, asi asi «zvinokanganisa".
WeGerman Security Investigator Stack Kupwanya akatumira vhidhiyo pa Twitter kwayinoratidza kuti yakwanisa sei kubiridzira AirTag microcontroller uye kugadzirisa zvinhu zveiyo software yemukati yekutevera software.
Tinogona kutaura kuti akwanisa kuita a jailbreak kune AirTag uye kugadzirisa software yayo yemukati, uye nekudaro chinja maitiro echishandiso. Semuenzaniso, muongorori wezvekuchengetedza akakwanisa kugadzirisa yake NFC URL. Muvhidhiyo, iwe unogona kuona maitiro eiyo yekutanga AirTag uye neyako yatove yakaputsika.
Ndinovimba Apple inocherekedza uye inogona "kudzivirira" kupinda kune iyo firmware Zvekushandisa. Kana zvisiri, iyo jailbroken AirTag inogona kuve chishandiso "chine ngozi" kune zvakavanzika zvevamwe mapato, vanogona kuve vanobatwa nekudzora kwekumira kwavo pasina mvumo yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Nyanzvi yekuchengetedza inokwanisa kubiridzira AirTag
Stella Low ndiye Apple mutevedzeri wapurezidhendi wezvekutaurirana